ukuqunjelwa cishe wonke umuntu. Ngakho-ke, ukwazi kancane mayelana izidakamizwa "zemikhosi" Ngeke engadingekile.
ama-enzyme akhiqizwa ngokuqhubekayo kwamanyikwe, ezinye izitho zokugaya. Kufanele (evamile) ngokwanele ukuba sikwazi ukugaya zonke ukudla washisa yithi. Kodwa lokhu kuyinto evamile evamile. Futhi esikudlayo akuyona njalo into nawe ungadla. Ubuningi esindayo, okunamafutha, ukudla carbohydrate bephoqeleka ukuba asebenze kwamanyikwe ukugqoka. Akakwazi ukubhekana, ikakhulukazi uma kuye kwadingeka izinkinga emzimbeni, noma uma ukulayisha emgudwini wakho wokugaya ukudla ngale ndlela hhayi kanye kuphela ngonyaka, kodwa kunalokho ngezikhathi. Futhi ukuze asize kwamanyikwe bamane bangene yimuphi enzyme zangaphandle, equkethe izidakamizwa, "zemikhosi". It kungokwalabo izindlela enzymatic.
Njengengxenye omuthi pancreatin samanje, hemicellulose futhi Bile. Enzyme zazo pancreatin (Amylase, protease bese lipase) ukusiza ekugayeni ukudla izakhi eyanele ezifana carbohydrate, amafutha namaprotheni. Umuthi "zemikhosi" manual futhi uncoma yokuthuthukisa ukucutshungulwa zonke izingxenye ukudla okungukuthi ngenxa yokuba khona kuwo of Bile sezinkomo kanye hemicellulose, esiza kahle esiswini ukubhekana isitshalo fibre ukuthi kunzima inhlabamkhosi. Ngaphandle kwakho konke lokhu, lo izidakamizwa kakhulu kwandisa ukukhiqizwa enzyme zomzimba womuntu.
Uma kwamanyikwe kuyinto womuntu (noma ezinye izitho zokugaya) hhayi angabhekana ngayo imisebenzi yabo ngenxa ukuvuvukala noma ezinye izifo ngemva radiotherapy, kokungenela kuhlinzwa, kungasiza ngokushesha wachaza izidakamizwa. Umuthi "zemikhosi" imfundo on isicelo futhi linikeza nezinguquko ezihlobene nokukhula esiwohlozayo kunoma yiziphi izinhlaka ukugaya, lapho normal ukuhlafuna ukudla noma belungiselela ultrasound ukuhlolwa (X-ray) kwalezi nge ukudla noma ukudla okungenamsoco.
Indlela ukuthatha imithi?
Umuthi "zemikhosi" Kunconywa ukuthatha 1 tablet ngesikhathi esifanayo ukudla. Awudingi amaphilisi ukuhlafuna noma akuqede. Ezimweni ezimbi kakhulu kakhulu, udinga ukuthatha amaphilisi 2. Isikhathi izidakamizwa ekuphathweni angenamkhawulo. Futhi uma enzyme somzimba kungukuthi kukhiqizwa, kungase kuphele iminyaka eminingi ilandelana ukuthatha.
Umhlahlandlela zemikhosi presents njengoba umuthi akanayo kabi kakhulu imithi emizimbeni. Kodwa namanje it is hhayi Kunconywa ukuba ukuthathe ngemithamo ezinkulu ngoba kungenzeka uhudo, ukuhlanza kanye nokuhlukumezeka endaweni esiswini. Kwesinye isikhathi lokhu imithi kungabangela ukuvuvukala acinene nolwelwesi lwamafinyila, ukuqubuka, outflow ngafikelwa izinyembezi.
Akuvunyelwe ukuba sisisebenzise amafomu okukhulu ukuvuvukala kwamanyikwe, futhi ezimeni exacerbation of ezingamahlalakhona ukuvuvukala kwamanyikwe indlala. Akuvunyelwe ukuyisebenzisa futhi ngoba izifo zesibindi, okuyinto ahambisana nokwanda kokungabi bilirubin egazini, ne yokujama tsi emathunjini, kuyilapho i-hepatitis ezingathathelwana, yezifo kwesinye nenyongo (empyema), ngisho uma hypersensitive kunoma izingxenye.
Medicine "zemikhosi" nomthelela ukumuncwa antibiotic sulfonamides umzimba. Akubalulekile ukuvumela ngemva kokudla izidakamizwa ngokweqile. Ngempela, ezimweni ezinjalo zingase zikhuphuke inani uric acid egazini plasma kanye nomchamo. Uma ngengozi kwathi zithutha eziningana wangena emzimbeni, kuyobe sekudingeka ukwenze lokho ukumisa ukusebenzisa leli imithi. Kungcono ukuthatha imithi ukuthi ukunciphisa ukungakhululeki ukuthi kubangelwa izidakamizwa, "zemikhosi". Ukufundiswa elikushoyo ukudayiswa khulula zomuthi ekhawunteni Pharmacy. Akubalulekile ukubamba ithebhulethi ezindaweni zokulahla futhi efudumele. On the Usuku lokukhishwa, ungakwazi ukuyisebenzisa iminyaka engu-3.
Welulekela ngemva kokuzivivinya amandla for girls